Otu esi arụ ọrụ | Martech Zone
Fraịde, Ọgọstụ 28, 2009 Douglas Karr
Onye ọ bụla na-ekwu banyere otu esi arụ ọrụ dị iche iche… ụnyaahụ, mụ na David nwere mkparịta ụka Ọrụ Nlekọta Ọrụ Brown County center na anyị tụlere otu-ọrụ. Nke ahụ bụ… ịgbanyụ ekwentị gị, ngwa desktọọpụ twitter gị, imechi ozi ịntanetị gị, ịgbanyụ nrịba ama - na ịme ụfọdụ ọrụ.
Anyị nwere ọtụtụ ihe ndọpụ uche ugbu a, ọ na-emetụta ogo ọrụ anyị.
Adịghị m onye ofufe nke ọtụtụ ọrụ. Ndị ọrụ ibe m site na ọrụ ndị gara aga ga-akwado eziokwu ahụ bụ na abụ m onye isi. Ọ na-amasị m ịchọta akụkụ, lekwasị anya n'ihe m na-eme, ma gbue ya. Mgbe ụfọdụ ha na-abịakwute m ma tụlee ọrụ ọzọ, m ga-ele ha anya dị ka zombie… na-echetaghị na ha jụrụ m ajụjụ.
Nwa m nwanyị hụrụ nke a n'anya, n'agbanyeghị ... nke a na-abụkarị mgbe ọ rịọrọ ka enye ya ikike ime ihe m ga-asị mba. 🙂
Na agbanyeghị… nwalee ya! Ọ bụrụ n’inwe Blackberry, gbanye ya na nkịtị (agaghị ama jijiji) wee tụgharịa ya n’elu tebụl ka ị ghara ịhụ ihu ya ka ọ na-enwu mgbe ozi ọhụụ kụrụ. Ọ bụrụ na ị na-aga nzukọ, hapụ ekwentị gị na tebụl gị ma lekwasị anya na nzukọ ahụ. Ọ bụrụ n ’ime ụlọ ndị isi na nzukọ, nzukọ ahụ ga-efu azụmahịa gị ọtụtụ puku dollar. Debe ekwentị ma rụọ ọrụ ahụ!
Gbalịa gbalie izu na-abịa - gbochie awa abụọ ruo atọ na kalịnda gị na Mọnde. Kpebie ọrụ ị ga-arụ ọrụ na ya. Mechie ụzọ gị, gbanyụọ ọkwa desktọọpụ niile, wee bido. You'll ga-eju ọtụtụ ọrụ ị ga-arụzu.
Tags: email azummmemme ahiaN'imeMyspacePintrestPodcasts
Ndị na-eri ihe anaghị azụ ahịa izu oke
Aug 28, 2009 na 8:50 PM
I chefuru otu ndụmọdụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ime ihe dị mma-ime… agbalịrị ime ka ọrụ gị na Bean Cup!
Aug 29, 2009 na 12:31 PM
Ọ bụ ụwa nke ọtụtụ ọrụ, Ma anyị ga-eme njikwa oge maka ịme ọtụtụ ọrụ n'otu oge. Agbanyeghị ekele maka ịkekọrịta echiche gị.
Aug 30, 2009 na 1: 16 AM
Ezigbo ndụmọdụ .. Echere m na m nwere ike ịnwale taa taa na ụfọdụ ọrụ ụlọ. Ma ana m ahụ ebe Emma Adams si abịa .. Enwere m ike ị nweta klaasị na-enweghị ịlele blackberry.
Ka o sina dị, nnukwu post ..
Dale McCrory kwuru
Sep 1, 2009 na 3: 22 AM
Doug… M na-achọ ezi usoro iji otu-ọrụ wee gafee ezigbo otu… M na-eji Pomodoro Usoro ( http://www.pomodorotechnique.com/ ) mgbe m kwesịrị ilekwasị anya n’inweta ihe na ọ dị m mkpa ime ya n’oge na-agbanwe agbanwe. Enweghị m ike iji ya n'oge ụbọchị jupụtara na nzukọ, mana mgbe enwere ọtụtụ ihe m ga-eme, ọ bụ usoro kachasị mma m chọtara ... nke ezumike. 25 pomodoros ma ị ga - ewe nkeji iri atọ… Ejirila usoro a done.
Sep 8, 2009 na 1:21 PM
Daalụ maka nnukwu post a, ọ mere ka m chee echiche… M na-agbanyụ ọkwa na TweetDeck na Digsby iji mee ka ọnụọgụ ndị na-adọpụ uche na-arụ ọrụ.
Sep 14, 2009 na 2:42 PM
Ọ masịrị m otu ị kwuru na ị dị ka zom mgbe ị lekwasịrị anya na otu ọrụ. Edere m akwụkwọ banyere Zombies na nka nke otu ihe.